ဓာတ်ပုံ Calculator ကိုအခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » ဓာတ်ပုံ Calculator ကို - စမတ် Calculator ကို & သင်္ချာ solver
ဓာတ်ပုံ Calculator ကို - စမတ် Calculator ကို & သင်္ချာ solver APK ကို
သငျသညျမြန်ဆန်တိကျသင်္ချာအဖြေကိုရှာနေပေမယ့်သင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရသင်္ချာ Calculator ကို & သင်္ချာ Solver.Are - မတ် Calculator ကိုအတူညီမျှခြင်းဖြေရှင်းရန်သင့်ဖုန်းရဲ့ကင်မရာကိုသုံးမလား? ဓာတ်ပုံ Calculator ကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းသင်္ချာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ချက်ချင်း mathway အဖြေတွေကိုလက်ခံရရှိရန်သင်္ချာကင်နာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ခြေလှမ်း solver နေဖြင့်ခြေလှမ်းပေးစဉ်စမတ် Calculator ကိုရိုးရှင်းစွာဓာတ်ပုံဂဏန်းတွက်စက်နှင့်သင်္ချာ solver ချက်ချင်း mathway အဖြေတွေကိုကယ်တင်တတ်၏သင်္ချာဖြေရှင်းချက်ဖမ်းယူနိုင်သည်။
သင်္ချာ solver မိဘတစ်ဦးကသူ၏ဆိတ်သငယ် 's သင်္ချာအိမ်စာနှင့်အတူကူညီခြင်းနှင့်တန်းကျောင်းဂဏန်းသင်္ချာသို့မဟုတ်အလယ်တန်းကျောင်း algebra, ဓာတ်ပုံကိုဂဏန်းတွက်စက်မှတ်မိဖို့ကြိုးစားနေများအတွက်တန်ဖိုးရှိသောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
သင်္ချာ app ကိုကျောင်းသားများက၎င်းတို့၏အလုပ်စစ်ဆေးကူညီရန်နှင့်မည်သို့မှန်ကန်သောသင်္ချာအဖြေကိုရောက်ရှိဖို့ကသူတို့ကိုပြသနိုင်ပါတယ်။ ထိုအသင်္ချာပြဿနာ solver မိဘများသင်ခန်းစာများရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့သင်ယူ mathway ပေါ်တက်တိုက်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
စမတ် Calculator ကိုအတွက်✦Handwrittenမေးခွန်းများကို - သင်္ချာ solver app ကိုလက်ရှိထောက်ခံကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်သူတို့soon.✦ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်
✍ SMART တွက်ချက်မှုအင်္ဂါရပ်များ ✍
ღဓာတ်ပုံ Calculator ကို app ကိုကင်မရာဖြင့်သင်္ချာပြဿနာများတွက်ချက်။
သင်္ချာပြဿနာღ solver ရိုးရှင်းသောအဖြစ်ရှုပ်ထွေးသင်္ချာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
ღစမတ် Calculator ကိုလည်းလက်စွဲစာအုပ်သင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်ပါရှိသည်။
လိုအပ်သောအဘယ်သူမျှမအင်တာနက်နှင့်အတူသင်္ချာ Scanner ღ။
သင်္ချာ graph နှင့်အတူ solver နှင့်ဇယား, Algebra ဂဏန်းတွက်စက်သို့မဟုတ်သင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်ღ။
သင်္ချာ Calculator ကိုღအဆင့်မြင့်သင်္ချာမေးခွန်းများရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။
ღစမတ် Calculator ကို trig နှင့်ကဲကုလမှ algebra ထံမှ mathway ဖြေရှင်းချက် instants ။
ကျောင်းသားများဆက်ဆက်သူတို့အဘို့မိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်းလုပ်ဖို့သင်္ချာ Calculator ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ သင်္ချာကင်နာသဘောတရားများကိုလေ့လာသင်ယူစရာမလိုဘဲအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍသင်္ချာ app ကို mathway, ဆိုကရေးတီး, သင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်ဓာတ်ပုံဂဏန်းတွက်စက်နှင့်သင်္ချာအဖြေကိုချခြစ်လိုက်တာနဲ့ခိုင်းနှိုင်း, သင်္ချာပြဿနာ solver သင်္ချာဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်စာကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
☝ဒီစမတ်ဂဏန်းတွက်စက်အထောက်အ Install နှင့်သင်ရလိမ့်မယ်:☝
★ အခြေခံပညာ Calculator ကို: အခြေခံပညာရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူအခမဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို mathematics ။
★ ဓာတ်ပုံ Calculator ကို: ဓာတ်ပုံကိုယူပြီးအားဖြင့်သင်္ချာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ရသောကောင်းသောသင်္ချာအိမ်စာအထောက်အ။
★ စမတ် Calculator ကို: သင်္ချာဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ Casio 570 အပေါ် အခြေခံ.
★ တွက်ချက်မှုသမိုင်း: သင့်ရဲ့တွက်ချက်မှုကိုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှမ
★ ညီမျှခြင်းဂဏန်းတွက်စက်: သင့်ရဲ့သင်္ချာအိမ်စာထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်။
★ ဂရိတ်ဒီဇိုင်း: လက်ဟန်ခြေဟန်အပေါ်အခြေခံပြီး nice user interface ကို။
★ တုန်ခါခြင်းနှင့်အသံ: တကယ့်မတ်ဂဏန်းတွက်စက်တက်ကြွလာသည်ကြောင်းဖက်ရှင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ။
သင်တို့ရှိသမျှသည်လေ့ကျင့်ခန်း input ကိုမှတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းမလိုအပ်ပေမယ့်ပုံယူပြီးနောက်သင်တစ်ကြိမ်သာမှာဖြေရှင်းနည်းများရနိုင်ကြပါဘူး။
ဒီဓာတ်ပုံ Calculator ကို app ထဲမှာအခြေခံဓာတ်ပုံကိုဂဏန်းတွက်စက်တက် add, အနုတ်, အမြှောက်နှင့်ဌာနခွဲပါရှိသည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, မတ် Calculator ကိုရာခိုင်နှုန်းတွက်ချက်မှုများနှင့်ကွင်းများပါဝင်သည်။
ကီးဘုတ်ရဲ့အောက်ခြေကနေတက်တွန်းနှင့်သိပ္ပံနည်းကျဂဏန်းတွက်စက်ကိုပြသပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာ All-In-One စမတ်ဂဏန်းတွက်စက်, mathway, သင်္ချာ app ကို Casio 570 အပေါ်အခြေခံပြီးအပေါငျးတို့သသိပ္ပံဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုများပါဝင်သည်။
စမတ်ဂဏန်းတွက်စက်နှင့်အတူသင်ရုံပုံသေနည်းထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်နှင့်ညီမျှခြင်း Calc အလိုအလျောက်အဖြေကိုပေးပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံဂဏန်းတွက်စက် - ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်စမတ်ဂဏန်းတွက်စက်အဘို့, ရိုးရှင်းတဲ့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာအခိုင်အမာ။ သင်္ချာ solver app ကိုရိုးရှင်းပေမယ့်နေဆဲအပေါငျးတို့သအလှတရားအချက်များစောင့်ရှောက်လော့။ သင်တို့သည်ငါတို့၏သင်္ချာဂဏန်းတွက်စက်နှင့်အတူတွက်ချက်မှုလုပ်နေတာပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ကီးဘုတ်၏ထိပ်မှဆင်းတွန်းနှင့်သင်တို့၏တွက်ချက်မှုသမိုင်းပြသပါလိမ့်မည်။ စမတ် Calculator ကိုသူတို့ကိုသင်, copy delete သို့မဟုတ်ပြန်သုံးနိုင်အောင်ကိုသင်တို့ရှေ့မှာပြုသောအမှုရှိသမျှကိုဓာတ်ပုံကိုဂဏန်းတွက်စက်ပြသထားတယ်။
စမတ် Calculator ကို - သင်္ချာ Calculator ကို & သင်္ချာ solver ကျောင်းသားအားလုံးအတှကျအပလီကေးရှင်းကိုသုံးပါရန်လွယ်ကူသည်။ တစ်ဦး pic ကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်ချက်ချင်းအဆင့်နှင့်အတူအဖြေရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ချာ app ကိုအသုံးပြုပါ! ထိုအကျွန်ုပ်တို့၏စမတ် Calculator ကို 100% အခမဲ့ပါ!
ဓာတ်ပုံ Calculator ကို - စမတ် Calculator ကို & သင်္ချာ solver
14.33 ကို MB
မိတ်ဆက်ခြင်း Minecraft ဗီဒီယို